Umbuzo A330 Pack Mega
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #232 by Numan28
Sawubona! Mina oyilandile A330-300-200 Iphakheji.
Kodwa akukho-VC ku-Turkish Airlines yami A330-300:
Ngabe kukhona ongangisiza?
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #233 by Dariussssss
Kukhona izinguqulo ezimbili iphakethe, umuntu esenziwe POSKY, ukuthi omunye akanalo VC. Enye eyenziwe Thomas Ruth has a VC.
Azikho izinkinga, uma konke ifakiwe kahle, une kokubili.
Sazise uma kukhona nezinye izinkinga.
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #235 by Numan28
Ngumuphi kubo iyona POSKY version futhi iyiphi Thomat Ruth nguqulo?
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #238 by Dariussssss
Uma uya ukhethe izindiza, kukhona 3 okuya phansi uhlu, noma amamenyu: izindiza umakhi, umshicileli kanye izindiza hlobo. Chofoza umshicileli, khetha Thomas Ruth. Ungakhathazeki uma ubona Thomas Ruth-Luis Quintero, kungcono into efanayo.
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #239 by Numan28
Alikho a330-300 noma 200 nge izihlalo abagibeli VC?
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #242 by Dariussssss
yeh .... akukho nhlobo ukuthi, ngempela. Njengoba ngishilo, A330 ngu TR iza VC, kodwa ingabe endlwaneni eyakhiwe umgibeli, ngempela awazi. Nginesifo iphakethe efanayo efakwe kodwa ngoba angazi obakhathalelayo endlwaneni eyakhiwe, ngangingeke ngifuna ke.
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #243 by Numan28
Kodwa akukho A330-300 ngu thomas ruth zikhona kule nguqulo posky, futhi bathi ngaphandle VC
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #244 by Dariussssss
... oh indoda .....
Kulungile, kuqala -give kimi isixhumanisi iphakethe izindiza ukulandwa
Okwesibili, ingabe lapha noma kwenye indawo?
Okwesithathu, is it efakwe kahle?
Lona omunye enginakho: http: //www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799
futhi njengamanje, kweyami FSX Ngine-TR A330-300 phezulu futhi iyasebenza. Ngakho-ke, sinikeze eminye imininingwane.
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #245 by Gh0stRider203
UDariussssss wabhala: njengamanje, kweyami FSX Ngine-TR A330-300 phezulu futhi iyasebenza. Ngakho-ke, sinikeze eminye imininingwane.
ok kahle, ngiku-zakho eziyisithupha i F-14, sidewinders ikhiyiwe ungene kini kusukela uke sekuthiwe ilitshe nobutha ..... Bengilokhu inikezwe selihanjiswa nomlilo uma wenza omunye hambisa okungalungile .....
iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #246 by Dariussssss
Yini engakwenza okungalungile? Mina ngempela konke okusemandleni ami ukuze usize lapha. Uma ngithini noma ngenzani okuthile okungalungile, ngiyaxolisa, kodwa mina ngempela ungacabangi ngenzile.
Isikhathi ukudala page: 0.365 imizuzwana